विश्वकप क्रिकेट–२०१९ सुरु हुनुअघि त्यसलाई लिएर धेरै प्रश्न गरिएका थिए । पहिलो प्रश्न इंग्ल्यान्डमा क्रिकेटको खस्कँदो लोकप्रियताका सन्दर्भमा थियो । जुन देशमा क्रिकेटको जन्म भएको छ, त्यही देशमा किन यो खेल युवाहरूको आकर्षणमा पर्न छाड्यो ? दोस्रो प्रश्न, एकदिवसीय क्रिकेटको भविष्यलाई लिएर नै थियो । पुरा पढ्नुहोस्
एकसरो कपडामा लुके नाटकका कलाकार
राजाराम पौडेल, श्रावण ४, २०७६
हालै जर्मनीमा युथ त्रिएसन थिएटरको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको नाटक घेरो प्रदर्शन गर्न गएका तीन जना कलाकार जर्मनीमै लुकेका छन् भने कलाकारले गरेको गल्तीका कारण युथ क्रिएसन थिएटर समस्यामा परेको छ । विभिन्न टीकाटिप्पणी तथा आलोचनाका कारण यो विषयमा उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो पक्ष आयोजना गरेरै प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाश रानाभाट, श्रावण ४, २०७६
कुमार कट्टेल ऊर्फ ‘जिग्री’ हास्य टेलिश्रृंखला भद्रगोलका कलाकार हुन् । वि.सं. २०४६ सालमा सोलुखुम्बुमा जन्मिएका कट्टेल आउँदो शनिबारदेखि ३० वर्ष लाग्दैछन् । कलाकारिताको क्षेत्रमा दाजु सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ ले प्रवेश गराएका जिग्री आज हास्य क्षेत्रमा स्थापित भैसकेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
सुरक्षा काममा कटिबद्ध अभिनेत्री हुन् । उनी कुनै चलचित्रको चरित्र जस्तै आफूलाई पनि फिट राख्छिन् । चलचित्र घरमा काम गर्दा नै सुरक्षाको कामका बारेमा अपडेट हुने मौका पाएँ । उनीसँग मेरो व्यक्तिगत ढंगको चिनजानी छैन । यद्यपि उनी काम गर्न सजिली कलाकार हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
अधिकारी रवीन्द्र, श्रावण ४, २०७६
जीवनमा धेरै उतारचढाव आयो । कसैबाट सुनेथेँ, उनका लागि बितेका वर्षहरू त्यति राम्रा रहेनन् । करिब १२–१३ वर्षपछि उनी एक दिन कामविशेषले म काम गर्ने अफिसमा आए । म भएको ठाउँमा आएर सिधै भने– कति पैसा दियो भने यो जागिर पक्का हुन्छ ? मेरी वाइफलाई लगाउनुपर्‍यो । श्रीमतीका लागि जागिरको आवेदन दिन आएका रहेछन् । पुरा पढ्नुहोस्
डेस्कटप डट आईएनआई फाइल कहाँ–कहाँ बसेको हुन्छ भन्ने कुरा प्रयोगकर्तालाई थाहा नहुन सक्छ तर उक्त फाइलले यति हैरान पार्छ कि प्रोग्राम फोल्डरभित्र अरू आवश्यक फाइलहरूभन्दा बढी डेस्कटप डट आईएनआई नै बढी देखिन थाल्छ । यसलाई जतिपटक डिलिट गर्‍यो यो उति नै देखा पर्दै जान्छ । पुरा पढ्नुहोस्
चलचित्र ‘मारुनी’को दोश्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । चलचित्रको ‘सक्दिन म बाँच्न’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक गीतमा चलचित्रका शिर्ष कलाकार अभिनेता पुष्प खड्का र अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई रोमान्टिक अवतारमा प्रस्तुत गरिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्